Wadadmada reer galbeedka qaarkood oo mar keliya wada eedeeyey dalka Ruushka… – Hagaag.com
Wadadmada reer galbeedka qaarkood oo mar keliya wada eedeeyey dalka Ruushka…
Wadamada reer galbeedka ayaa u diray eedeymo isku mar ah dalka Ruushka oo ku qaaday weeraro elektronic oo ballaaran hay’ado caalami ah iyo kuwa wadani ah oo kala duwan, oo ay ku jiraan Ururka OPCW ee la dagaalanta faafida Hubka Kiimikada, taasi oo beenisay Moscow.
Waxaa dib u soo cusboonaaday is jiid jiidkii u dhaxeeyey reer galbeedka iyo Ruushka oo la xiriira burcada elektroniga, sida ay ku dhowaaqday dalka Netherlands oo dalkeeda ka saartay afar ka mid ah muwaadinin Ruush ah oo sheegtay in ay la shaqeynayaan sirdoonka miliariga Ruushka oo loo yaqaano GRU.
Wasiirka gaashandhigga Netherlands Ank Bijleveld ayaa sheegtay in basaasiinta Ruushka ay ku eedeysay in ay isku dayeen in ay weerar elektronic ah ay ku qaadaan website-ka ururka mamnuucida faafida hubka kiimikada OPCW oo xafiiskeeda yahay magaalada Hague bishii April ee la soo dhaafay.
Waxaa intaa ku dartay in weerarrada elektarooniga ah ee sirdoonka Ruushku ay la beegsadeen faylal la xidhiidha baadhitaanka caalamiga ah ee uu hogaamiyo Nederland oo ku saabsan soo rididii diyaaradii Malaysia ee ku burburtay dhulka dalka Ukraine 2014.
Ra’iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo dhigeeda Holland Mark Rutte ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ku cambaareynayaan weerarada elektroniga ee Ruushka, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan labada dal, waxaa sidoo kale la beegsaday hay’adda la dagaalanta daroogada dhinaca Sport oo loo yaqaano WADA,waxay wacad ku mareen in ay difaaci doonaan hay’adaha caalamiga ah.
Ingiriiska iyo Australia ayaa sidoo kale ku eedeeyay sirdoonka milatariga Ruushka in ay ka dambeeyaan weerarrada internetka ee ka dhacay dunida oo lagu beegsanayo hay’adaha siyaasadda iyo isboortiga, shirkadaha iyo warbaahinta.
Canada ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in weerarada internetka ay gaareen hay’ado ku shaqeeya dhulkeeda oo ka mid ah hay’ada la dagaalanta isticmaalka daroogada sport-ga oo xafiiskeedu ku yaallo magaalada Montreal ee Canada, xafiiska Canada ee anshaxa sport-ga, waxay mas’uuliyada weeraradaasi dusha ka saartay Ruushka.
Midowga Yurub ayaa bayaan ku muujisay walaaca ku saabsan waxa ay ku tilmaantay isku dayga Ruushka inuu weeraro ammaanka hay’ada mamnuucida hubka Kiimikada, bayaanka ayaa lagu sheegay in falkan uu yahay gardaro iyo xadgudub loo geystay Ururka.
Sidoo kale wasaarada cadaalada Mareykanka ayaa ku eedeeysay toddoba sarkaal oo Ruush oo ka tirsan sirdoonka milatariga oo ku lug lahaa weeraro elektaroonik ah, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shirkada tamarta nukliyarka ee Pennsylvania, marka lagu daro Ururka mamnuucida Hubka Kiimikada kaas oo baaraya isticmaalka hubka kiimikada ee Suuriya iyo sumowga basaaskii hore ee Ruushka Sergei Skripal ee Britain.
Taas bedelkeeda, afhayeenka wasaarada arrimaha dibada ee Ruushka Maria Zakharova ayaa beenisay maalintii Khamiista eedeeymaha Ingiriiska iyo Australia in dalkeeda uu ka danbeeyay hawlaha burcad electronic oo lagu beegsaday Ururka la dagaalanka daroogada iyo nidaamka elektroniga ee Wasaaradda gaadiidka Ukraine, iyo faragelinta doorashadii madaxweynaha Mareykanka, waxay ku tilmaantay arrintaasi sheeko la abuuray.